Mgbe lo Na-etinye saịtị Ọhụrụ: Tụọ Ugboro abụọ, Bee Ya Ozugbo | Martech Zone
Mgbe lo Na-etinye Saịtị Ọhụrụ: Tụọ Ugboro abụọ, Bee Ya Ozugbo
Friday, April 16, 2010 Satọde, 27 Juun 2015 Douglas Karr
Ndị na-ere ahịa ọnlaịnụ na-emepe emepe atụmatụ websaịtị ha ọhụụ site na itinye oge niile na -emepụta ma na-etinyezi saịtị ọhụrụ ahụ… wee tụọ nsonaazụ mgbanwe ahụ. M shutter mgbe m hụrụ ụfọdụ ụlọ ọrụ na-agbasa ọtụtụ saịtị n'ime ọnwa nke ọ bụla ọzọ n'ihi na onye ọ bụla "na-arụ ọrụ".
Tupu ịmalite ịmalite atụmatụ nke saịtị ọhụrụ ahụ, ịkwesịrị ịghọta nke ọma ebe saịtị gị guzobere ugbu a. Na-etinye saịtị ọhụrụ ugboro ugboro dịka ịmalite marathon ugboro ugboro. Na-agaghị na-eme ka oge na-efu gị, ị na-pushing nloghachi na ego n'ihu si.
Ọ bụrụ na ịnweghị nchịkọta arụ ọrụ nke ọma ma tụọ akụkụ ọ bụla nke saịtị gị, wepụta oge iji tinye ya nke ọma ugbu a - na saịtị gị dị ugbu a. Ọ nwere ike iyi nzuzu itinye oge n'ọrụ nchịkọta ọma na saịtị ị na-aga ahịhịa, ma ị kwesịrị ịghọta otu ndị mmadụ si abanye na saịtị gị, ịgagharị na saịtị gị, na ịtụgharị na saịtị gị dị tupu ị na-emepụta saịtị ọhụrụ gị.
Nakwa, mkpa ka ị maara nke ọma ihe peeji nke na-ugbu a ogo ọma maka mkpa Keywords. Tinye n'ọrụ ngwá ọrụ dị ka Semrush, ị nwere ike ịkọwapụta ya peeji nke itinyere aha na nke ahụ na ogo ya nke ọma na njin ọchụchọ. Ọtụtụ oge ndị ahịa na-etinye saịtị ọhụrụ na ndị isi na ụzọ gbanwere kpamkpam. Adịghị mma.
Na mgbakwunye ịchọ, na-ekwu banyere saịtị na ibe dị ezigbo mkpa. Ọ bụrụ na saịtị ndị ọzọ zoro aka na okporo ụzọ gị, ma ọ bụ edebanye aha gị na saịtị mmekọrịta mmadụ… ịchọghị ka okporo ụzọ ahụ kwụsị na ibe 404. Zụlite atụmatụ ntụgharị site na ibe ochie gị na okporo ụzọ na ibe ọhụrụ gị - ma hụ na ọdịnaya ahụ na-agbanwe agbanwe.
Na nkenke, tụọ okpukpu abụọ ma bepụ otu oge. Tụọ saịtị ochie gị n'ụzọ dị irè site na nchịkọta, search engine ogo na backlinks. Debe saịtị ọhụrụ gị iji jiri ụzọ na ikike ọ bụla ị wuru ugbu a, naanị mgbe ahụ, tinye saịtị ọhụrụ ahụ.
Tags: web imewewebsite
Nweta offline, wepu onwe, opekata mpe nwa oge
Nzuzo Nrụpụta: Nkà na ụzụ abụghị teknụzụ mgbe niile